Al-shabaab oo lasheegay in ay Xiriir dhow la leeyihiin Koox ka Dagalanta Tanzania – Hornafrik Media Network
Al-shabaab oo lasheegay in ay Xiriir dhow la leeyihiin Koox ka Dagalanta Tanzania
By HornAfrik	 On Sep 22, 2018
HornAfrik-Heey’adda caalamiga ah ee xasarada Aduunka ee ICG loo soo gaabiyo ayaa Warbixin ay soo saartay Jimcihii waxay kaga hadashay Shan sano kadib xaalka Al-shabaab markii ay qaadeen Weerar Westgate mall-Nairobi 21kii September 2013kii.
Heey’addu waxay sheegtay in Al-shabaab aysan wali kasuulin in ay adkeeyaan Xiriirkooda dibadda inkastoo Kenya ay ku guuleeysatay in ay yareeyso dhalinyaraddii Al-shabaab ay ka soo qoran jireen Kenya.
Hey’adda Xasaradaha Aduunka ayaa Qayb warbixinteeda ka mid ah waxay ku sheegtay in Al-shabaab ay kordhisay koox ka dagaalanta Wadanka Tanzania oo Al-shabaab ay Dadka Deegaanka ugu yeeraan iyaguse aan magic rasmi ah la bixin.
“Al-shabaab, si kastaba waxay adkeeyeen xiriirka ay la leeyihiin maleeshiyaadka Tanzania” ayey Hey’addu ku sheegtay Warbixinteeda.
Kooxda Tanzania waxay horraantii 2011kii qaybo ka mid ah Wadanka Tanzania ka fuliyeen Weerarro ay ku dileen Dad masiixi ah, Culimo Muslimiinta iyo saraakiil Booliis ah, xilligaasna masuuliyiinta Tanzania ayaa cambaareeyay Dambiileyaasha.
Balse 2015kii ayey soo if baxday Awooda Kooxda oo weeraradoodu joogto noqdeen, islamarkaana qortay dhalinyaro badan oo u dagaalanta.
Warbixinta ICG oo soo qaaday Awoodda waqtigaan ee Al-shabaab ayaa sheegtay in wali ay Al-shabaab Awood u leedahay in Weerarro ka geeysato Wadamadda geeska Africa.
Gudaha Soomaaliya-na wali cududoodu waa halis
Madaxweyne Farmaajo oo u yeeray madaxda Galmudug.
Xog-Kulamo isdaba joog ah oo ka socda Villa-Somalia.